सूर्य नेपाल च्यालेन्जको दोस्रो दिन जयराम अग्रस्थानमा | Hamro Khelkud
आयोजक रसियाको समूह विजेता बन्ने लक्ष्य
विश्व कपमा समूह चरणका ३२ खेल सकिदा के भए? रोनाल्डो भन्दा केन अगाडि
रोनाल्डोको पोर्चुगललाई इरानको चुनौती
विश्व कपमा आज ४ खेल, पार्चुगल र स्पेन अघि बढ्लान ?
पोल्यान्डमाथि कोलम्बियाको जित, नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना जीवित
पोल्यान्डविरुद्ध कोलम्बियाको अग्रता, मिनाको गोल
सूर्य नेपाल च्यालेन्जको दोस्रो दिन जयराम अग्रस्थानमा
बुधबार, पुस २७, २०७३
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– सूर्य नेपाल च्यालेन्जको दोस्रो दिन बुधबार ५ अन्डर ६३ को कार्ड बनाउँदै जयराम श्रेष्ठ शीर्षस्थानमा उक्लेको छन् । रोयल नेपाल गल्फ क्लबको पार ६८ मा जारी च्यालेन्जमा दुई दिनमा जयरामले ७ अन्डर १ सय २९ को प्रदर्शन गरेका छन् । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०१६/१७ को दोस्रो प्रतियोगितामा पहिलो दिन जयरामले २ अन्डर ६६ रनको प्रदर्शन गरेका थिए । ६ अन्डर १ सय ३० को प्रदर्शन गरेका सञ्जय लामा दोस्रो स्थानमा छन् । उनले दोस्रो दिन ५ अन्डर ६३ को कार्ड बनाए ।
नम्बर एक व्यवसायिक खेलाडी शिवराम श्रेष्ठ (६६), भुवन नगरकोटी (६९) संयुक्त रुपमा तेस्रो स्थानमा छन् । उनीहरुको दुई दिनको प्रदर्शन २ अन्डर १ सय ३४ को प्रदर्शन गरेका छन् । १ ओभर १ सय ३७ को प्रदर्शका साथ धनबहादुर थापा (७२) पाँचौं स्थानमा छन् । ३ अन्डर ६५ को प्रदर्शनका साथ पहिलो दिन धनबहादुर र भुवन पहिलो दिन संयुक्तरुपमा शीर्षस्थानमा रहेका थिए ।
रामे मगर (६९) छ ओभर १ सय ३८ को कार्डका साथ छैटौं स्थानमा छन् । रामकृष्ण श्रेष्ठ (७३), रवि खड्का (६९), र विकास अधिकारी (६५) ४ ओभर १ सय ४० को प्रदर्शनका साथ संयुक्त रुपमा सातौं स्थानमा छन् । चुडाबहादुर भण्डारी (७२) दसौं स्थानमा छन् ।
फ्रन्ट नाइनमा १ अन्डर ३३ को प्रदर्शन गरेका जयरामले सुधार गर्दै ब्याक नाइनमा ४ अन्डर ३० को कार्ड बनाएका थिए । उनले ब्याक नाइनमा १० औं, १३ औं, १५ औं र १८ औं होलमा बर्डि गरे । सञ्जयले फ्रन्ट नाइनमा ४ अन्डर ३० र ब्याक नाइनमा १ अन्डर ३३ को कार्ड बनाए ।
२२ गल्फर दोस्रो चरणको लागि छनोट भएका छन् । जसमा शीर्ष १० सँगै दीपक मगर, प्रदीपकुमार लामा, पशुपति शर्मा, सूर्यप्रसाद शर्मा, प्रसन्न उप्रेती, दीपेन्द्र रायमाझी, प्रभातकुमार राजवहाक, सचिनप्रसाद भट्टराई, आशिष परियार, कृष्णमान राजवहाक, शिवकुमार पौडेल र बलभद्र राईले अन्तिम दुई चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
६ एमेच्योर गल्फरले पनि दोस्रो स्थानमा प्रवेश पाएका छन् । १ ओभर ६९ को कार्ड बनाएका मिथुन राईले शिवराम माझी र सन्तोष रोक्कालाई ३ स्ट्रोकले पछि पारेका छन् । मिथुनको दुई दिनको प्रदर्शन ५ अन्डर १ सय ४१ रहेको छ । अघिल्लो दिन शीर्षस्थानमा रहेका जीवन राई, फुन्टसोक एन लामा र रोहित आचार्यले पनि दोस्रो चरणमा स्थान सुरक्षित बनाएका छन् ।
नेपाल प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनको आयोजना र सूर्य नेपाल प्रालकिो प्रायोजनमा जारी प्रतियोगितामा ४ लाख रुपैयाँ पुरस्कार रहेको छ । विजेताले ७५ हजार, दोस्रोले ४६ हजार र तेस्रो हुने खेलाडीले ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । शीर्ष २१ खेलाडीले नगद पाउनेछन् ।
पल्सर स्पोर्टस् अवार्डको मनोनयनमा क्रिकेटको दबदबा, पारस र सन्दीपबीच पनि प्रतिस्पर्धा
सोमवार, बैशाख ३१, २०७५
धनलाई वेस्टर्न ओपनको उपाधि
शुक्रबार, फाल्गुन २५, २०७४
जयरामलाई ४ स्ट्रोकको अग्रता
बिहिबार, फाल्गुन २४, २०७४
एन्फा निर्वाचनमा प्रतिबन्धित पूर्वअध्यक्ष थापाको छटपटी !
एसियन गेम्स र साफ च्याम्पियनसिपको लागि दोस्रो चरणमा ३३ खेलाडी छनोट
विश्व कपमा आजका खेलहरु
नेयमार कोस्टा रिकाविरुद्ध खेल्ने
एसियाडका लागि युवा टोलीको घोषणा- किरण, रोहित र भरत छानिए
आर्मी समूह विजेता, लुम्बिनी उपविजेता
साइक्लिस्ट नारायणलाई खेलकर्मीको श्रद्धान्जली
ललित स्मृतिमा मनाङको पहिलो जित, थ्री स्टार समूह चरणबाटै बाहिर
फ्रेन्डस् र हिमालयन शेर्पा क्वार्टरफाइनलमा
टफिच्चो जुनियर फुटसल च्याम्पियनसिप शुरु
मेस्सीको पेनाल्टी मिस [भिडियो]
शनिबार, असार २, २०७५
प्रदेश ३ विरुद्ध ६ [हाइलाइट्स]
बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५
जापान र सेनेगल रोकिए, छनोट अझै पक्का भएन
जापान र सेनेगलको पहिलो हाफ १-१
ललित मेमोरियल फुटबलमा मोरङको जित
अरेन्ज टेक प्रा लि